musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Typhoon In-Fa inoremadza nzvimbo yeShanghai muChina
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • nhau • Theme Parks • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mazana engarava akaburitswa kubva pachiteshi chakabatikana kumaodzanyemba kweShanghai.
Typhoon In-Fa yakawira pasi. Mvura zhinji yakanaya yakanaya yegore rose mumazuva matatu chete svondo rapfuura mudunhu repakati reHenan, ichiuraya vanhu vanosvika makumi mashanu nevasere.
Shanghai Pudong neShanghai Hongqiao nhandare dzakadzima mazana erwendo nekuda kwekusvika taifun In-Fa. Dzimwe ndege dzinotarisirwa kumiswa neMuvhuro.
Shanghai yakavhara mapaki uye rwizi rwenzvimbo yeBund dunhu, inozivikanwa nzvimbo yevashanyi. Disneyland yakavharwawo.
Typhoon In-Fa inotarisirwa kutendeukira kuJapan uye inogona kukanganisa maOlympics ari kuenderera mberi.
NeSvondo na12.30: 38 pm Typhoon In-Fa yakawira pamhenderekedzo yePutuo, Zhoushan, muEast China Zhejiang Province ichitakura mhepo dzinosvika makumi matatu nemasere pasekondi pakati, sekuongorora kwakaitwa neNational Meteorological Center.
Inenge mazana maviri yambiro yenjodzi dzemamiriro ekunze dzakapihwa kuEast China kuShanghai neZhejiang neJiangsu mapurovhinzi neSvondo mangwanani. 200 yambiro idzi dzakapihwa kusvika na132 mangwanani muZhejiang chete inova ndiyo inotakura dutu.
Zvichakadaro, iyo National Marine Environmental Forecasting Center yakachengeta yambiro yayo mbiri tsvuku yemafungu nemafungu muShanghai neSvondo mangwanani, uye yambiro dzvuku dzemafungu emvura munzvimbo yeHangzhou Bay muZhejiang.
Kunaya kwemvura kwakayerwa nemamirimita zana nemakumi maviri kusvika mazana maviri emamirimita nedzimwe nzvimbo dzichisvika mamirimita mazana maviri kusvika mazana matatu. Kunaya kwemvura yakawanda paawa imwe chete kunotarisirwa kusvika pamamirimita makumi mana kusvika pamamirimita makumi matanhatu nedzimwe nzvimbo dzichisvika mamirimita makumi masere.
Kubva nezuro, Mugovera kusvika China chinotevera, zvikamu zvezvitima zvinotarisirwa kukanganiswa neTyphoon In-Fa mudunhu reYangtze River Delta zvakamiswa kuti zvione kuchengetedzeka kwevafambi, Xinhua yakashuma.